Dominica dia manohy manamaivana ny famerana COVID-19
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Dominica dia manohy manamaivana ny famerana COVID-19
Nanohy nanandratra i Dominica Covid-19 ferana satria tsy nisy fielezan'ny vondrom-piarahamonina nahitana aretina tao anatin'ny 60 andro. Ity fanambarana ity dia avy amin'ny minisitry ny fahasalamana, fahasalamana ary ny famatsiam-bola vaovao, Dr. Irving McIntyre tamin'ny 11 Jona 2020.
Vokatry ny fanalefahana ny fetra, ny sinema, trano fisotroana, mpandraharaha fizahan-tany, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, tranomboky, gym, loteria ary fivarotana kilalao dia avela hisokatra tanteraka amin'ny asa aman-draharaha. Mihidy hatrany ny ivon-toerana fikarakarana sy ny fikolokoloana. Dr. McIntyre koa dia nanambara fa: "Ny orinasa dia avela hiasa amin'ny ora fiasana mahazatra alohan'ny COVID 19 izay iharan'ny ora famandrihana." Nohavaozina ny ora famandrihana ary manomboka amin'ny 15 Jona 2020, ny ora tsy fahazoana mivoaka vaovao dia manomboka amin'ny 10 hariva ka hatramin'ny 5 maraina ny Alatsinainy hatramin'ny Alahady. Azo idirana ny morontsiraka sy ny renirano mandritra ny ora tsy-ora.
Ny minisitry ny fahasalamana dia nanentana hatrany ny Dominikana hanohy hanaraka ny paikady momba ny fahasalamana sy fiarovana ary torolàlana nomen'ny Minisiterany satria hitombo ny fahafahan'ny tranga COVID miverina amin'ny fiverenan'ireo Dominikana monina any ampitan-dranomasina, ireo miditra tsy ara-dalàna ary ny fanokafana indray ny sisintanin'ny firenena. Tamin'ny 9 Jona 2020, mpianatra Dominikana 55 no nody avy any Etazonia ary salama tsara daholo. Olona 90 izao no mipetraka ao amin'ny tranon'ny quarantine izay tantanan'ny governemanta. Ny minisiteran'ny fahasalamana dia hanomana fandaharam-pitsapana COVID-19 ho an'ireo vondrona hafa mety hampidi-doza mba hahitana olona ao amin'ny trano fitaizana be antitra sy fonja, mpitambola fivarotana lehibe sy mpamily.
Puerto Rico hanohy ny fizahan-tany any amin'ny volana ambony
Mihena ny tsenan'ny trano any Portugal amin'ny Mey 2020